မိုးလှိုင်ည ၏ ကဗျာ သို့
Posted by pandora at 8:06 PM
မျိုး...ကတော့ တုံးမှာ မဟုတ်ဘူး
နေဘုန်းလတ် အမြန်ဆုံးလွတ်မြောက်ပြီး နေကောင်းကျန်းမာပါစေ...
ဒါကတော့ မွေးနေ့ကျင်းပပေးတဲ့ ပန်ပန့်အတွက်...
ဒို...ရေမီဖာကို အမှတ်မထင် သွားတွေ့တယ်...အဲဒါ
ရာ...သီမရွေး ပွင့်မယ့် ဂီတပန်းတပွင့်ပဲပေါ့...
Happy Birthday to Ko Nay Phone Latt!!!
A Free Bird towardsaFree Burma!!!!
with best wishes, Suuchit
မွေးနေ့လေး ကိုအမှတ်တရ လုပ်ပေးတဲ့ ပန်ပန့်ကို ကျေးဇူးတင်သလို...၊ ကိုနေဘုန်းလတ် အမြန်ဆုံး လွတ်မြောက် ငြိမ်းချမ်းနိုင်ပါစေ..။
“ ဖွဲ့ဆိုချင်တဲ့ သံစဉ်ချိုတွေကို
ကြိုးပြတ်နေတဲ့ ဂစ်တာတစ်လက်ဟာ ကျွန်တော်ဖြစ်တယ်… ”(နေဘုန်းလတ်) .....တဲ့။
ခံစားချင်တိုင်း ခံစားလို့ ရနေတဲ့ လူသားတွေထဲမှာ
နှုတ်ဖျားက ပွင့်ပွင့်လင်းလင်းပြောနေကြတဲ့ လူသားတွေထဲမှာ
သွားချင်တဲ့ အရပ် သွားလို့ရနေတဲ့ လူသားတွေထဲမှာ
လျှာအရသာခံ စားတတ်ကြတဲ့ လူသားတွေထဲမှာ
လှပတဲ့ မြို့တော်သစ်လေး တည်ဆောက်ကြဖို့ ခရီးဆက်
ငါ့တို့လက်ထဲက မြို့တော် လွတ်မကျစေရဘူး...
ညီလေး…မင်းလက်ထဲက မြို့တော်လွတ် မကျစေနဲ့တော့....။
ကိုနေဘုန်းလတ် ဇွန်၂၈ရက်နေ့ (၂၉)နှစ်ပြည့်မွေးနေ့ လက်ဆောင်
ငါတို့ မင်းကို မေ့လျော့နေခဲ့ကြတယ်။
မေ့မရတဲ့ အကြောင်းအရာတွေ များလွန်းပြီး မေ့ကျန်ခဲ့တာလား။
မေ့မေ့ပျောက်ပျောက်နဲ့ မင်းကို မေ့ကျန်ခဲ့တာလား။
မင်းရဲ့ မွေးနေ့ဟာ တခြား မွေးနေ့တွေလို
ဒါပေမဲ့ မတူညီတဲ့ ဖြတ်သန်းမှုမျိုးနဲ့
မင်းအတွက် အကျည်းတန်ရမယ့် နေ့ရက်တရက်ဖြစ်ကျန်နေမှာတော့
မင်းဟာ ဘလော့လောကအတွက် ရှေ့ဆောင်လမ်းပြပဲ။
ငါတို့ ပြောချင်တာတွေကို ပြောချလိုက်ဖို့
ငါတို့ ခံစားမှုတွေကို စာနာတတ်ဖို့
မင်းရဲ့ ရင်ဘတ်တစုံကို လွှတ်ချပစ်ခဲ့တယ်။
အဲဒီ လွတ်ကျသွားခဲ့တဲ့ မြို့တော်ကနေ
ငါတို့ မျှော်လင့်ချက်တွေ ရရှိခဲ့တယ်။
ငါတို့ ဆက်လက် မျှော်လင့်နေကြမယ်။
ငါတို့ ဆက်လက် ရင်ဖွင့်နေကြမယ်။